Malunga nathi - Guangzhou Chengfeng Mzalwana Industrial Co., Ltd.
Guangzhou ChengFeng Brothers Industrial Company Limited zitshintshi e zeedola imbali yamanani, ishati ukususela ekuqaleni kokuthengisa
uhambo lomoya lokuhamba ngenqanawa, umanyano kunye nenkqubela phambili, ubulungisa kunye nokuxhamla kunye, ukuthatha uxanduva!
ukuba umqhubi kushishino isiphelo eliphezulu-glassware ulwenziwo, ukwenza umahluko ulwenziwo wena, kunye nokwenza iimveliso zethu ezixabisekileyo!
iglasi yethu inegalelo ekuhlambulukeni nasekuhlambulukeni kokuphila!
umgangatho, ukusebenza kakuhle, ixabiso, ubuntu
Intshayelelo Ibali leNkampani
Eli gama lophawu lindibaniselwano yamagama abasunguli beenkampani ezimbini u-CHENG kunye no-FENG ngokuzalwa ngabazalwana. I-logo idibanisa amagama abo okuqala kwaye iphathelwe kubume bebhabhathane. Intsingiselo echaziweyo yale logo 'ibhabha ngamaphiko amabini anamandla, manyanani kwaye nijongise phezulu ukufezekisa iphupha'. Amabhabhathane adityaniswa ukusuka kumbungu ukuya kwiiyantlukwano ezimilo, ukusuka kumabhabhathane azalisayo imibungu, ukusuka kumbungu ukulinganisa ukuya kumabhabhathane, umjikelo wobomi uyaqhubeka. Oku kubonisa ukuba ishishini lethu liyakhula ukusuka kwincinci ukuya enkulu, inyathelo ngalinye esililungisayo, sililungisa kunye nesikweko ukusuka kwisizukulwana ukuya kwisizukulwana, kwaye sikhula ngokuzinzileyo.
Uyilo LOGO luvela kwigama elidibeneyo lekomityi yeglasi kunye ne-whisky, isetyenziswa kwikomityi yewhiskey yekomityi yokuqalisa uphawu. Ileta 'G' yenzelwe ukufana nokujonga okujongwa kwileta yokuqala kunye nekomityi ye-hexagon ye-whisky. Emva kwexesha ngenxa yokukhula kwemfuno yentengiso, ngoku iyasetyenziswa kodwa ayikhawulelwanga kwiilebheli zabucala zeekomityi zekofu, iiglasi zewayini ebomvu, iiglasi zobisi kunye nezinye izinto ezihanjiswa mihla le zeekomityi zeglasi. Oku kuthengiswa ikakhulu kwaye kuthengiswa ngeqonga le-E-commerce elikwi-Intanethi.